Piper Doll 100% Rasmi Rasmi ah | Jacaylka Anime Dolls | Urdolls
Piper Doll waa caruusadda naqshadaynta qoorta ugu qumman uguna madhan
Piper Doll waa soo saare xirfadlayaal caruusadaha galmada leh madaxa iyo jirka oo aan hagaagsaneyn oo nolol leh. Marka la eego naqshadeynta muuqaalka caruusadda, waxaan ku adkeyneynaa naqshada asalka ah. Mid ka mid ah astaamaha ayaa ah qoorta aan xadka lahayn iyo isku xirnaanta jirka, runtiina waxay u gaar tahay soo saaraha kale. Piper Dolls waxaa loo yaqaanaa qaababkiisa cajiibka ah ee Jabaan iyo qaab kartoonnimo iyo tayo aad u fiican, si taxaddar leh loo qaabeeyey oo nolol la siiyay, waana mid ka mid ah noocyada caruusadaha caanka ku ah suuqa.
Nooca ： Piper Dolls Xigasho ：Shiinaha
Waxyaabaha: Silicone Dolls Dolls Style: Naag waaweyn oo jinsi ah, Naag jinsi ah, Doob jacayl, caruusad jinsi ah, iyo wixii la mid ah.
Hordhac ： Piper Doll wuxuu kuyaalaa qalabka Silicone ee ugu jilicsan uguna raaxada badan suuqa. Naqshadeeyay naqshadeeyaha caanka ah iyo sawirqaade, Mizuwali, caruusadooda anime-dhiirrigelintu waa mid ka mid ah caruusadaha ugu caansan ee Silicone-ka halkaas ka jira! Wajiyaal qurxoon, jir jilicsan, buunbuunin xunbo xumbo ah, iyo naqshadaha qoorta oo aan xaddidneyn waa takhasuskooda.
+ Dolls-Silicone Jinsi tayo sare leh
+ Qalfoofka cusub ee ikhtiyaariga ah: kala-goysyada laba-laabma, garbaha
–Xulista Xaddidan ee Dollsyada